Indlela ukuqeda toxemia yokukhulelwa
Toxemia yokukhulelwa esihambisana cishe njalo owesifazane. Zimbili izinhlobo ubuthi - ekuseni khulu, ngemuva kwesikhathi (aka preeclampsia). ekuseni ukugula Early iqala emhlabeni ngenyanga yesithathu futhi ithatha cishe 12 amasonto. Ngokuvamile, isikhathi nesenzakalo of ubuthi ngamunye. Ngenxa ukushintsha kwama-hormone ukwandisa izinga lokugayeka kokudla kokubili kukamama kanye nengane, imikhiqizo umzimba buthelela usegazini, futhi umzimba kudingeka balahle kubo. Kungakhathaliseki kahle ukuthi umama noma ezihlobene ingane yabo engakazalwa, ngomqondo ngokomzimba, kusenzima into angaphandle, futhi umzimba has ukujwayela, ukujwayela i-fetus. Umbuzo kanjani ukuqeda toxemia okukhulelwa kanye kungakhathaliseki ukukwenza ngaso sonke?
Ngeshwa, ukuqeda ubuthi akuyona yaphumelela ngokugcwele. Ungasebenzisa kuphela kukunciphisele le nqubo, ngokusiza umzimba nokuthumba owesifazane owayezithwele, ukulihambisa ubuhlungu omncane. Izimpawu ezifana isicanucanu nokuhlanza, ukudla ukungabekezelelani, luvelo iphunga, amathe yanda, ubuthakathaka, ukozela, ukucasuka, ukucobeka, abonisa toxemia ngesikhathi sokukhulelwa. Okufanele ukwenze kuleli cala? Kukhona imithetho ethize okumele ilandelwe ukunciphisa imithelela ubuthi emzimbeni abakhulelwe.
Ngaphambi ukuvuka ekuseni ukuze ngidle ucezu lwesinkwa amadala, ubhontshisi noma ama-crackers, isiphuzo amanzi noma isiphuzo sezithelo. Ukudla kwasekuseni kudingeka ukulungiselela ngaphambi kokulala. Indlu kungcono udle elele phansi. Uma ukhulelwe wesifazane yendlu ke kungcono ukuthatha isidlo ukukhanya - izithelo, amabhisikidi, ibhodlela lamanzi noma itiye kalamula noma Mint. I esikhwameni kufanele njalo kube mints - esimweni isicanucanu. Isicanucanu futhi usize ezisawolintshi.
Ngesikhathi sokukhulelwa kungcono ukuyeka ethosiwe, okubabayo kanye okunamafutha. Ukudla kufanele kube lula, futhi kube kufanele athathwe njalo, kodwa izingxenye ezincane. Njalo emahoreni 2-3 ungaba ukudla, ezifana apula noma amantongomane. Ukudla kufanele kube kushisa noma kubanda - efudumele kuphela noma chilled. Lapho amathe ngokweqile kudingeka Hlambulula umlomo wakho nge nekufakwa chamomile noma sage, buhlanjululwe kalamula futhi enhle. Kafushane, isihloko lezi zincomo elula, owesifazane iyeke vusa umbuzo kanjani ukuqeda toxemia yokukhulelwa.
Akubalulekile ukuba ngokuzimela enze ikhambi toxemia. Uma kudingeka, kufanele uxhumane nodokotela wakho. Kungcono njalo ukuhlanza umzimba wakho nge the ukumnika rose okhalweni. Yokwelapha nakho kungasiza toxicosis - uwoyela ephumelela kunazo peppermint, lemon, anise, rosemary, lemon namafutha.
Kufanele uvame ukubadlula epaki noma uye nje ngaphandle. Izikhangibavakashi ezokuthutha zomphakathi kufanele kugwenywe, kodwa uma singenzi, kufanele ngangokunokwenzeka ukukhetha phambi kwesihlalo futhi angabheka phambili, ngaphandle ebheka. Nokucindezeleka kanye nokukhathazeka nayo ilahlekile.
Uyini isicanucanu umehluko ngesikhathi toxicosis kusukela sinciphisa isicanucanu esibangelwa ezinye izifo? Nge ukudla okunobuthi emva ukuhlanza kuba lula lapho ukukhululeka toxicosis kuyobe kungakazukufika masinyane. Futhi isikhathi ezahlukahlukene zosuku. Lapho ushevu retching uqhubeke nje umzimba awukwazi ukuqeda ubuthi, kungakhathaliseki isikhathi sosuku. Uma ukuhlanza kwenzeka ogxile ekuseni, isizathu salokhu - toxemia yokukhulelwa.
Uma ekuseni ukugula ivame ukuba kube budisi khulu, ke yithuba ukwelashwa kudokotela. Ngokuhamba ejwayelekile ubuthi ukuhlanza kungenzeka izikhathi ezintathu ngosuku. ekuseni ukugula Early akuyona ingozi empilweni futhi kokuphila kukamama kanye nengane, kuyilapho yokugcina kungaholela nemiphumela ezifana edema yamaphaphu noma ukopha palsy. izisebenzi kuphela abafanelekayo, seluleka ku kanjani ukuqeda toxemia yokukhulelwa, ngeke ikhumbule zonke ngezimo ezihambisana nokukhulelwa yowesifazane.
Ngo ikakhulukazi ezimweni ezimbi kakhulu, uma inkinga okukhulu ekulondolozeni kokuphila kukanina, kungase yanquma ukuthi ukukhipha izisu ngokuzalwa yokufakelwa. Ngakho-ke, uma izimpawu ubuthi ngemva kwamasonto angu-30 okukhulelwa, futhi ngisho ifomu iyakhula, kufanele ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze abone udokotela. Ukuqala ngaphambili ukuba aphathe toxicosis ngasekupheleni, aba maningi amathuba okuba umphumela ube evumayo ukukhulelwa.
Kufinyeta, singasho ngokuqiniseka ukuthi umbuzo kanjani ukuqeda toxemia yokukhulelwa kungenzeka ingabi impendulo esiqondile. icala ngamunye ubuthi ngabanye, naphezu nezimpawu ezifanayo. Ngakho-ke, impendulo ke kumele, okokuqala, onguchwepheshe, kanti okwesibili, ngoba yilowo nalowo wesifazane kukhona impendulo yalo mbuzo eyodwa kuphela akuxhomekile nje kuphela esimweni izici zomzimba wayo, kodwa futhi yokwanda okuqhubekayo yezici sokukhulelwa ahlobene izimo.
Zokugula Extragenital kwabesifazane abakhulelwe: zokuvimbela, ukwelashwa. Umthelela sokukhulelwa extragenital
Izimpawu isisu ezingabanjwanga: kanjani ukuqaphela ingozi?
Kokuya esikhathini ilibele inkwethu, ukuhlolwa negative. Kuke kwenzeke yini kube nokubambezeleka nyangazonke izilonda? Can thrush abangela kokuya esikhathini kokulibala?
Abomvu egazi esesikhathini: Izimbangela
Yiziphi izimpawu kwezidingo okusheshayo e multiparous?
Kungakanani iqala umthandazo kusihlwa? Kanjani ukufunda umthandazo kusihlwa?
Ama-roller for usimende zokuhlobisa. Ithuluzi plasters zokuhlobisa
Ukhukhamba: okunhlobonhlobo amamaki
"Felodip": yokusetshenziswa, ukubuyekezwa. izidakamizwa analogue
"Qhathanisa Poll": ukubuyekezwa. It is ukukhokha sayithi?
Uma ukuminyana acinene, ekwelapheni amakhambi abantu - indlela engcono kakhulu!
Ikhekhe ngoba umdobi: incazelo, design imibono
Igazi Cancer: Izimpawu kanye Izimbangela